भक्तपुर डाक्टर्स सोसाइटी गठन तथा सुभकामना कार्यक्रम सम्पन्न
प्रकाशित मिति : २५ आश्विन २०७८, सोमबार १८:३६
भक्तपुर, २४ असोज २०७८
भक्तपुर जिल्लामा कार्यरत करिब सय जना सरकारी तथा गैर सरकारी चिकित्सकहरुले मिलेर भक्तपुर डाक्टर्स सोसाइटी गठन गरेका छन ।
जिल्लाका बिभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरु विच पेशागत भाइचारा अभिबृद्धी गर्दै आफ्नो हक हितको लागी आवाज बुलन्द गर्ने सो संस्थाको उद्देश्य रहेको उक्त समाजका अध्यक्ष डा. सन्जित कुमार शाहले बताउनु भयो ।
विभिन्न अस्पतालहरुका बिच सह कार्य गर्दै बिरामीहरुको सहज व्यवस्थापन गर्नु संस्थाको एउटा प्रमुख उद्देश्य रहेको जानकारी दिदै उक्त संस्थाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. उज्ज्वल चालिसेले गरिब बिरामिको उपचार सहायता कोश सन्चालन गरिने जानकारी दिए।
बिभिन्न अस्पतालहरुमा कार्यरत चिकित्सहरुको शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य प्रबर्धन गर्नुपनि यो संस्थाको महत्व रहेको जानकारी दिदै समाजका उपाध्यक्ष डा. सुरज धौबडेलले आगामी दिनहरुमा नियमित शैक्षिक गतिबिधीहरु सन्चालन गरिने जानकारी दिए। सम्पुर्ण चिकित्सकको हकहितको लागिपर्नु रहेकी जानकारी सचिब डा. राजिब शाहले दिए ।
उक्त संस्था गठन घोषणा तथा बिजया दशमीको सुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई बिभिन्न बरिष्ठ चिकित्सक हरुले सम्बोधन गर्दै शुभकामना ब्यक्त गरेका थिए ।
उक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल चिकित्सक संघका महासचिब डा. बद्री रिजालले उक्त संस्थालाई हर सम्भव सहयोग गर्ने एशोसियसन केन्द्रीय कमिटी तयार रहेको जानकारी दिए ।